यही हो माओवादीको राष्ट्रवाद ?
"भण्डारीले टुक्र्याएर मर्ज गराउने प्रस्ताव राख्दा विरोध भयो, तर बाबुरामले सिङ्गै देश गाभ्ने मनसुवा प्रकट गर्दाचाहिँ किन विरोध नभएको ?"
शरतसिंह भण्डारीले असोज ९ गते तराईका २२ जिल्ला नेपालबाट छुट्टनि सक्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक मञ्चबाट बोलेका कुरा विवादास्पद हुनपुगे र त्यसकै फलस्वरूप निजले रक्षामन्त्रीको पद छोड्नुपर्‍यो । त्यसबखत माओवादी नेताद्वय मोहन वैद्य किरण र रामबहादुर थापा बादलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर भण्डारीको कथनलाई राष्ट्रघाती ठहर गरेका थिए । भण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने तिनको माग सार्वजनिक अभिलेखमा अङ्कित छ ।
अहिले माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रेस प्रतिनिधिहरूसामु बाबुराम भट्टराईले नेपालका सबै ७५ जिल्लालाई नै अर्को देशमा एकमुष्ट विलय -मर्ज) गराउने कुरा गर्दा भने माओवादी नेतृत्व चुप्प छ । न प्रचण्ड बोल्छन्, न वैद्य र नत बादल नै । किनभने तिनको सोचमा बाबुरामको कथन राष्ट्रघात अथवा देशद्रोह होइन रहेछ । दण्डित हुनुपर्ने अपराधको कोटीमा पर्दो रहेनछ । कदाचित् पर्दो हो त एनेकपा माओवादीको धारणा यतिन्जेलमा सार्वजनिक भइसक्थ्यो । आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्न १५ दिनको समय पर्याप्त हुन्छ ।
यो रहस्यमय मौनता किन ? यो माओवादी उदासीनताको तात्पर्य के होला ? कहाँ गयो देशको अर्ध-औपनिवेशक स्थिति अन्त्य गर्ने जनयुद्ध ताकाको माओवादी कबोल ? बाबुरामले त भन्लान्- मैले गरेको प्रस्ताव त्यसै दिशातर्फ त उन्मुख छ नि र अर्ध-उपनिवेशलाई पूर्ण-उपनिवेश गराऔं -गाभौं) भनेको त्यही आशयले त हो नि र साझा प्रकाशनको शब्दकोशमा मर्ज को माने विलिन हुनु, गाभिनु, मिसिनु भनेर दिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वका अग्रपङ्क्तिका सबै नेताहरूले विद्रोहका १० वर्षमा आठ वर्ष उतै आश्रय पाएका हुन्- यो कुरो किस्ताबन्दीमै भए पनि सबैले स्वीकार गरिसकेका छन् । पछि १२ बुँदेमार्फत नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसित सम्झौता गराईर् माओवादीलाई सत्तामा जाने बाटो खुलाइदिएको पनि भारतको सहयोगले रहेछ । उताका प्रभावशाली मन्त्री प्रणव मुखर्जीकोे अल्-जजिरा टेलिभिजनसितको भेटवार्तामा खुलस्त भनाइ आयो । तर माओवादी नेताले त्यसको खण्डन गर्न सकेनन् । उल्टो पुष्टि, पुनःपुष्टि गर्दै आएका छन् ।
केही महिनाअघि मुखर्जी काठमाडौं आएका बखत उनी बसेको होटलमा दर्शनभेटका लागि पुग्नेहरूमा प्रचण्ड पनि भएको नेपालको सञ्चारजगत्ले उतिखेरै देखेको हो । प्रचण्ड रअ का कर्मचारीलाई भेट्न कहिले सिलिगुडी त कहिले सिंगापुर पुगेको हुन्छन् भनेर बादल, गौरवसमेत प्रचण्डकै कामरेडहरूले भनेको, सुनिएको छ । प्रसङ्ग धेरै पुराना होइनन् । बिप्पा सम्झौता गर्दा बाबुरामले दिल्लीमा जुवा खेलेको कुरा गरेका थिए, काठमाडौंमा माओवादीको असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले त्यसबारे विरोधको स्वर पनि निकाले । तर असन्तुष्ट पक्ष सन्तुष्ट पक्षसित सहमत भएपछि -माओवादीको आन्तरिक कलह शान्त भएपछि) विरोधको बोली मधुरो भएर गई हराइसक्यो ।
नाटकको पटाक्षेप बौद्धिक कहलिन खोज्नेहरूको समुदायमा यदाकदा माओवादी अन्तरकलह नाटक पो हो कि भन्नेहरू पनि थिए । तर कतिपय माओवादीले वैमनस्य र मनमुटाव वास्तविक हो, अब हाम्रो पार्टी फुट्न सक्ने खतरा छ पनि भने । हुँदो पनि हो । परन्तु कुनै अदृश्य शक्तिले नाटकको पटाक्षेप गराइदियो । सबैले बाबुरामका अनुयायी अथवा समर्थक भएर रहनु श्रेय ठाने, ठानेकै छन् । नत्र नेपाल नाम गरेको देशको अस्तित्व नै लोप गराउने -मर्ज गराउने) आशयको अभिव्यक्ति बालुवाटारको किल्लाबाट आउँदा तिनीहरू किन लोप्रेकान लगाएर बस्थे ! किन निहुरमुन्टी न को मुद्रामा उभिएर ज्युँदो लास हुने विकल्प रोज्थे ?
सुरुङ युद्धलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसित जोडेर भाषण गर्दै जनसमुदायलाई प्रभावित पार्न अभ्यस्त प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु अघि विदेशी प्रभु लाई ललकारेको पनि सुनिएको हो । तर ती सबै अभ्यास माओवादीकै इमानदार कार्यकर्ता र जनसाधारणलाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रपञ्चमात्र रहेछन् । गत मंसिर १८ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित भेटवार्तामा प्रचण्डको निचोड फेरि एकपल्ट यी शब्दमा निस्केका छन्, छिमेकीसँग कहिलेकाहीं मनमुटाव भए पनि भूराजनीतिक अवस्थाले डिक्टेसन गरेको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यसको अर्थ नेपालको भूराजनीतिक स्थिति प्रचण्डले यत्रो ठूलो हिंसात्मक अभियानपछि बल्ल अहिले आएर ठम्याएछन् ! ०५२-६२ को विद्रोह त्यो यथार्थ नबुझ्दै सञ्चालन गरिएको थियो त ? यसबारे अबका दिनमा प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताबाट आउने वक्तव्य र व्याख्याहरू पुनरुक्तिमात्र हुने खतरा छ ।
यतिखेरको प्रश्न हुन्छ: के सरकार प्रमुखको ओहदामा बसेको व्यक्तिले मर्ज, सब-मर्ज जस्ता अंग्रेजी शब्दको आवरणमा विलयको बोली सुनाउनेसम्मको स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको जिम्मेवारी माओवादीलाई मात्र दिने ? नेपाली कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीको कुनै दोष छैन ? विषवृक्षमा मलजल गरेको जिम्मा तिनले र तिनका सहयोगी दलले लिनु पर्दैन ? के मधेसीको नाममा उभ्याइएका पार्टी र तिनका मोर्चामात्र बाहिरी शक्तिको मतियार शक्ति हो भन्न मिल्छ ?
देशको स्वाभिमान र अस्तित्वसित खेलवाड गरेरै भए पनि निजी महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने दाउमा रहेको मतियार प्रवृत्ति धेरैवटा पार्टीमा देखिन्छन् । संरक्षित देश सिक्किम भारतमा गाभिइसकेपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले एकपल्ट भनेका थिएः मर्जको प्रक्रिया तीव्र गतिमा लैजान लागिपरेका बत्तिसे चोर मध्येको म पनि हुँ । तर समय भड्किएपछिको सोचको के अर्थ हुन्छ र ? त्यस्तो व्यक्तिगत पश्चातापले के महत्त्व राख्छ र ?
कालान्तरमा भण्डारीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री भएका पवन चामलिङले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै भारतीय सङ्घमा मिसिएपछि सिक्किमले गरेको प्रगतिको व्यापक प्रचार-प्रसार गराएका थिए । नेपालकै हिमाल पत्रिकामा सिक्किमले प्राप्त गरेका लाभहरूको फेहरिस्त प्रायोजित पृष्ठ -विज्ञापन) मार्फत नेपालीहरूलाई सुनाएका थिए । एक चर्चित सञ्चारकर्मीको मद्दतले चामलिङको यो कथन पनि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसार हुन पायो, जसमा उनले सिक्किम भारतको प्रदेश भइसकेपछि आफू त्यस देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदको लागि पनि उम्मेदवार हुनसक्ने कुरा औंल्याएका थिए ।
छिमेकका चामलिङले त उम्मेदवारीसम्मको आशामात्र जगाएका थिए । तर अमेरिकाका बाराक ओबामाले त सफल उम्मेदवारको उदाहरण नै प्रस्तुत गरे । सन् १९६१ मा उनको जन्म भएको राज्य हवाई -टापु) सन् १९५९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पचासौं राज्य भएको थियो । र अमेरिकामा नजन्मेको भए आज उनी विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति कहाँ हुन पाउँथे ? हवाई अलग्गै राजतन्त्रात्मक देश रहिरहेको भए ओबामाले राष्ट्राध्यक्ष हुने मौका पाउने सम्भावना थिएन ।
हवाई अधिराज्यलाई सन् १८९३ मा अमेरिका अधीनस्थ भूभाग गराएकोमा एक सय वर्षपछि -सन् १९९३) राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले संसदको सहमतिमा क्षमायाचना गरे । भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीपछिका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले सिक्किमको विलय ठीक होइन भने । तर देसाई र क्लिन्टन कसैले पनि गल्ती भने सच्याएनन् ।
वैधानिकताको प्रश्न मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भन्ने लोकोक्ति छ । बहुलाएको जीव पछि सद्दे पनि हुनसक्छ, तर मरेको प्राणी फेरि ब्युँतिँदैन । दैवीशक्तिको चमत्कार अपवादको कुरा हो ।
बाबुरामको कथन शरतसिंहको सोचभन्दा गतिलो मान्नुपर्ने निचोड माथिको उखानको सन्दर्भमा निस्किन्छ । गाँसिएर आउने कुरो हो- माओवादी, कांग्रेस, एमाले ठूला पार्टी हुन् र यीमध्ये सबै भारतमुखी भएको शङ्कालाई यथार्थ मानिदिने हो भने नेपाल विलयको सशक्त विरोध नहुने देखिन्छ । राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको भए तापनि अहिलेको संविधानसभामा यी तीन पार्टीको बर्चस्व देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त यी तीन पार्टीप्रति समर्थन जनाउने स-साना पार्टीका तर्फबाट पनि सभासदको संख्या थपिन्छ । गोठालोले खेदेका भेँडाझैं नेताले डोर्‍याएका -सभ्य भाषामा पार्टीको अनुशासनमा बसेका) सभासदहरूले विलयको प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत हुन आएमा त्यो अस्वीकृत हुनदिने छैनन् । स्वीकृत गर्दा के परिणाम हुन्छ, व्याख्या गरिरहनु परेन । भूपरिवेष्टित देशको सिकायतको सम्बोधन हुन्छ र त्यसपछि हुने फाइदाहरू स्वतः भइहाल्छन् । के नेपालका राजनीतिक दलले खोजेको कुरा प्रकारान्तरले यही त होइन ?
प्रमुख राजनीतिक दलको मानसिकता यस्तो हो भने तिनका कार्यकर्ताको सोच के बेग्लै होला र ? बाबुरामले उच्चारण गरेको मर्जको सशक्त विरोध नभएको हुँदा अब यो देशको चिनारी नै लोप गराउने अभियानमा बहुसंख्यक नेताहरू लागेको निष्कर्ष निस्कन्छ । भण्डारीले टुक्र्याएर मर्ज गराउने प्रस्ताव राखे, त्यसको विरोध भयो । तर बाबुरामले सिङ्गै देश गाभ्ने मनसुवा प्रकट गर्दा खासै विरोध भएको छैन ।
यो नै जनस्तरको सहमतिको सूचक भए हवाई टापु अमेरिकामा गाभिएझैं गाभिनुको विकल्प नखोजे हुन्छ । होइन भने सर्वसाधारण नेपालीले बिकाउ नेताहरूको पछुवा हुन छोडिहाल्नुपर्छ । कार्यकर्ताको बिल्ला मिल्काइदिनुपर्छ र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको उद्गारमा पटक-पटक पर्ने गरेको अभिव्यक्तिअनुरूप स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्ने अठोटमा पुग्नु आवश्यक छ । कि विकल्प खोज्नुपर्छ अथवा त्यस्तो विकल्प दिनसक्ने व्यक्ति अथवा शक्तिलाई रोज्नुपर्छ । जगजाहेर छ, जनता कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन । र यस कार्यको थालनी अहिलेको संविधानसभाको विघटनबाट गर्न सकिन्छ । किनभने म्याद नाघेको औषधीले रोग-व्याधि निको पार्दैन, झन् चर्काउँछ । भ्रम पालेर नबसौं ।
प्रत्यक्ष कुरालाई के प्रमाण चाहियो र ?